နာဂဒေသတွင် ကူးစက်ရောဂါကြောင့် ကလေး ၄ဝဝ ကျော် ဆေးကုသပေးနေရမှုနှင့်အတူ ဆက်တိုက် သေဆုံးမှုများ?? - Yangon Media Group
နန်းယွန်း၊ စက်တင်ဘာ ၉
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ နန်းယွန်းမြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာသုံးရွာတွင် ကလေးငယ်လေးရာကျော် ဆေးကုသပေးနေရမှုနှင့်အတူ ဆက်တိုက်သေဆုံးနေမှုအား ဓာတ်ခွဲ နမူနာရယူရေးနှင့် ဆေးခန်းဖွင့်လှစ်ပြီး ရောဂါထိန်းချုပ်နိုင်ရေး တိုင်းပြည်သူ့ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ ဆရာဝန်ကြီးများခေါင်းဆောင်သော အဖွဲ့သည် စက်တင်ဘာ ၉ ရက်က ကွင်းဆင်းထွက်ခွာသွားပြီဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။
ဒေသဆိုင်ရာကူးစက်ရောဂါများ မျက်ခြည်မပြတ်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေး ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန္တာလင်း၊ ကူးစက်/တိုးချဲ့ ကာကွယ်ဆေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဆရာဝန်ဒေါက်တာကျော်သူဆွေ၊ ဓာတ်ခွဲကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်တို့အဖွဲ့သည် နယ်မြေခံကုသရေးဆရာဝန်များနှင့်အတူ နာဂဒေသသို့ သွားရောက်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ”အဲဒီမှာဖြစ်နေတာက အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါ AVI ပေါ့။ အနားက မဖြစ်သေးတဲ့ ရွာတွေကိုလည်း တတ်နိုင်သလောက်သွားမယ်၊ ဆေးဝါးတွေလည်းထပ် ဖြန့်ပေးနိုင်အောင်သယ်သွားတယ်၊ အနီးဆုံးမြို့နယ်မှာ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေး နိုင်အောင်လုပ်မယ်၊ ကူးစက်မြန်ပြင်းထန်ဖြစ်မှာပဲစိုးရိမ်တာ” ဟု ဒေါက်တာကျော်သူဆွေက ပြောသည်။
နန်းယွန်းမြို့နယ် ဒုံဟီးမြို့နယ်ခွဲရှိ ဝမ်နုတ်၊ ဟဟောင်၊ လန်ပန်းကျေးရွာတို့တွင် သြဂုတ်လ နောက်ဆုံးပတ်မှစ၍ ဖျားနာခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ရပ်ကျပ်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်းများ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဝမ်နုတ်ရွာနှင့် ဟဟောင်ရွာတွင် လူသေဆုံးမှုမရှိဘဲ လန်းပန်းရွာတွင်မူ ကလေးငယ်လေးဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး ယင်းအနီးရှိ ဟချွမ်းညိုရွာတွင် နှစ်ဦး၊ လက်ရှိရောဂါကူးစက် ဖြစ်ပွားနေသော ရှန်ဟဲပေါ်ကွန်ရွာတွင် တစ်ဦး၊ စုစုပေါင်း သြဂုတ် ၂၅ ရက်မှ စက်တင်ဘာ ၈ ရက်အထိ ကလေးငယ်ခုနစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း နာဂဒေသဦးစီးအဖွဲ့မှ သိရသည်။ ”အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ ရှန်ဟဲပေါ်ကွန်ရွာက လန်းပန်းရွာနဲ့ ခုနစ်မိုင်လောက်ဝေးတယ်။ ရွာက လူခြောက်ရာကျော်မှာ လေးရာကျော်လောက် ဆေးကုပေးနေရတယ်။ နှာခေါင်းကသွေးတွေရောထွက်တာ”ဟု နန်းယွန်းမြို့နယ်မှ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိမ်းမောင် ကပြောသည်။
နန်းယွန်းမြို့နယ်သည် ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်ကလည်း ရွာလုံးကျွတ်အစုအပြုံလိုက် ဖျားနာသေဆုံးမှုများရှိ ခဲ့ကြောင်း၊ ရောဂါဖြစ်ပွားရာကျေးရွာများသည် သွားလာမှုခက်ခဲခြင်း၊ သွားရောက်ကုသရာတွင်လည်း ဆေးဝါးများလုံလောက်စွာသယ်ယူနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း ဒေသခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကပြောကြားသည်။
”တစ်ခုခု အခက်အခဲကြုံလာရင် ချက်ချင်းမြန်မြန် ဖြေရှင်းတာကောင်းတယ်။ မဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ရင် သူ??
ဒေလီတွင် အဆောက်အအုံ ပြိုကျ၊ နှစ်ဦးသေ၊ များစွာ ပိတ်မိနေဆဲ၊ သေဆုံးမည်ဟု ယူဆရ